Qwilr: Uyilo loXwebhu lweQonga lokuGuqula ukuThengisa kunye nokuBambisana kweNtengiso | Martech Zone
Unxibelelwano lwabathengi luphawu lwalo lonke ishishini. Nangona kunjalo, nge-COVID-19 inyanzela ukunciphisa kohlahlo-lwabiwo mali 65% yabathengisi, amaqela anikwe umsebenzi wokwenza okungakumbi ngokuncinci. Oku kuthetha ukuba nakho ukuvelisa konke ukuthengisa kunye nentengiso yesibambiso kuhlahlo-lwabiwo mali olucuthiweyo, kwaye rhoqo ngaphandle kobunewunewu bomyili okanye iarhente yokuyivelisa.
Ukusebenza kude kunye nokuthengisa kukwathetha ukuthengisa kunye namaqela entengiso awasenakuxhomekeka kubuchule bokunxibelelana nabantu ukuze bakhulise kwaye bakhulise isiseko sabathengi bakho. Kukho ukwanda kwebango lesibambiso kunye namaxwebhu okutshintsha unxibelelwano ngobuso
Ngexesha elinje, umgangatho wonxibelelwano, kunye neeasethi zentengiso ezihamba nazo zinokuba ngumahluko kumashishini ekufumaneni, ekugcineni nasekulahlekelweni ngabathengi. Ngoku kunakuqala, abathengisi kufuneka baphucule umgangatho weeasethi zabo zedijithali ukunceda ishishini ukuba linxibelelane ngcono nesindululo sexabiso lazo kwaye lizise izimvo zokuyila ziphila kude.
Ukupakisha obu buchule kunokuba ngumceli mngeni. Izimvo ezimangalisayo zinokungathengiswa ngenxa yokunxibelelana okungalunganga, uyilo lwamaxwebhu abuthathaka, okanye ukukhetha i isayizi enye ilingana nayo yonke itemplate. Oku kwenza ukuhlangana nabathengi abanokubakho okanye abakhoyo kungasebenzi kakuhle, kungenakuchukunyiswa, kwaye kungathandeki.
Ukuphelisa uyilo olungelulo lwamaxwebhu
Ngaphambi kokuba i-COVID-19 ikhuthaze ukutshintshela ekusebenzeni okude, izixhobo zeshishini zakudala zazisele ziphinde zavuselelwa. Kodwa ukukhawulezisa umsebenzi okude kwakuthetha ukuba ulindelo lwamashishini luyatshintsha, kwaye itekhnoloji yeshishini, ngakumbi kwizinto ezinje ngoyilo lwamaxwebhu, kufuneka ukuba namandla ngakumbi ukuxhasa indlela entsha yokuthengisa kude.
Okwangoku, ukusuka ekuthetheni namaqela, ndifumanisa ukuba uninzi lusazinzile kwisikolo esidala esenziwe ngengubo okanye ukuvuselela izindululo zetemplate ngekopi elula kwaye uncamathisele ukonga ixesha. Bahlala bezithumela nge-static PDF.
Kunyaka ophelileyo, i-PDF yezigidigidi ezingama-250 zavulwa ngesoftware yeAdobe kuphela.
Xa ucinga ngako, kuyamangalisa ukuba amashishini asathumela owona msebenzi wabo ungcono kumaxwebhu e-static, angakuvumeliyo ukuba uhlele emva kokuba uwuthumele (ukuba ufuna njalo-okuhlala kusenzeka!) Okanye ubone ukuba umthengi uvule nini uxwebhu nge-analytics yoxwebhu lwakho.
Qwilr uyilo loxwebhu kunye nesixhobo esizisebenzelayo esitshintsha indlela amaqela okuthengisa kunye nawokuthengisa anxibelelana nesiseko sabathengi. Yakhiwe njengesisombululo kwimiceli mngeni ejongene nentengiso kunye necandelo lezentengiso, oko kubangelwe kukungalunganga, iindlela zakudala zonxibelelwano.
Siqaphele ukuba amaPDF amileyo kunye namaxwebhu eOfisi Suite akayinqumli kule mihla nakweli xesha langoku, kodwa ukuhamba ngezixhobo zoyilo lwedijithali kunokuba ngumceli mngeni kuyilo lwemihla ngemihla olungazobi. Ke ngoko, saqala ukwenza iqonga elilula kwaye elinomdla ngokwaneleyo eliza kuvumela abathengisi ukuba bayile izindululo, iikowuti, iphepha elinye lemveliso, kunye nokunye. Lonke uxwebhu lukwanomtsalane kubuhle kwaye kulula ukwenza, ukugcina amathemba ebandakanyekile.
Sebenzisa iDatha ukwazisa amaQhinga okuPhakamisa
Njengoko iintlanganiso zihamba kwi-intanethi, abathengisi kunye nabathengisi abanakuphinda bathembele kulwimi lomzimba ukumisela ukuba i-pitch ihambe kakuhle kangakanani, okanye ukufumana ingxelo yexesha lokwenyani emva kokubonisa.
Kodwa okona kubaluleke ngakumbi, ukuqonda isayikholoji emva kokuziphatha kwabaxhasi kwakuyeyona nto ibalulekileyo xa kwakusakhiwa iQwilr. Oku kufanele ukwazisa onke amanqaku ngokufikelela kunye nokwenza ingxelo komthengisi. Izixhobo zeQwilr ziza zipakishwe ngokusebenza kohlalutyo oluphambili kwaye zinokuveza iinkcukacha ezilahlekileyo ngembalelwano ebonakalayo. Oku kubandakanya ukubanakho ukwazi ukuba nini kwaye phi umamkeli evula uxwebhu, ngawaphi amacandelo abachitha ixesha elininzi, besazisa ukulandelwa kunye neendlela ezingaphezulu zokuthengisa.
Ukuhlala kwiBrand Intuitive
Kwintsimi enje ngentengiso, apho uphawu lwentengiso kunye nokubonwayo kuyinto yonke, kubalulekile ukubonisa iliso ngeenkcukacha kunye nobuhle ekunene ukusuka ekuhambeni. Kwiimeko ezininzi, umgangatho wonxibelelwano uhlala ubaluleke ngakumbi kunoluvo lwakho, ngakumbi xa kuthengiswa iinkonzo ezingabonakaliyo kunye neengcinga. Abathengi banamathuba amahle okukhumbula ulwazi oludlulisiweyo ngokubonakalayo ngaphezulu kwetekisi ende.
Amandla eQwilr kukulula kwayo, kwaye iqonga liza ligcwele ziitemplate ekulula ukuzisebenzisa, kunye neebhloko zokwakha iimodyuli zokwenza amaxwebhu apolishiwe ngokukhawuleza. Oku kwenza ukuba kube lula ngakumbi ukulawula unxibelelwano lwenkampani yakho kumaqela onke, ukuphinda ubeke iziphakamiso zakho ezilungileyo kunye nemibono ngelixa uhlala kuhlobo.
Abathengisi basebenzise iQwilr kuwo onke amanqanaba ohambo lwabathengi, ukusuka ekuthengeni nasekuvalweni kwentengiso kwinkonzo eqhubekayo. Oku kubonakala kumzekelo weqonga lolawulo lweendleko, i-Abacus, isebenzisa iQwilr ukucebisa iqhinga elitsha lokuthengisa umthengisi okwi-intanethi i-Kangaroo Shoes, ababezama ukukhula isabelo sabo sentengiso.
I-Qwilr yabo isiluleko kubandakanya iinkonzo ezininzi kuphawu lwentengiso, isicwangciso somxholo, kunye neprototyping, zonke zidityaniswe kwiqonga elinye. Oku kwenze kwalula ukulawula unxibelelwano lwenkampani kuwo onke amaqela, ukuphindisela owona msebenzi mhle, kunye nokuhlala uphawu. Ngokuphelisa unxibelelwano oluchitha ixesha kunye nesoftware engafunekiyo, ungabeka olona nyawo lwakho lubalaseleyo phambili, ngalo lonke ixesha.
Zama iQwilr mahala
tags: zodakauxwebhu lokuthengisa olunophawuIsindululo sentengiso enophawuintsebenziswano yoxwebhuitemplate yesindululoqwilramaxwebhu okuthengisa kunye nentengisoUyilo lwamaxwebhu okuthengisaisindululo sentengisoUyilo lwesindululo sentengisoIsoftware yokuthengisaIzindululo zokuthengisa